Alahady fahaefatra Karemy – 30/03/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: BokY voalohan’i Samoela 1 Sam 16, 1b.6- 7. 10- 13a
» Nohosorana ho Mpanjaka amin’i Israely i Davida «
Tamin’izany andro izany ny Tompo niteny tamin’i Samoela nanao hoe: “Fenoy diloilo ny tandrokao, dia mandehana fa irahiko ho any amin’i Isaï any Betlehema ianao, satria amin’ny zanany no nahitako ilay mpanjaka tiako”.
Nony tafiditra izy ireo dia nahita an’i Eliaba i Samoela ka nanao hoe: “Mby eto anatrehany tokoa ilay voahosotry ny Tompo”. Fa hoyny Tompo tamin’i Samoela: “Aza ny tarehiny no jerenao, na ny haavon’ny tsanganany, fa efa natanilako io. Tsy mba izay hitan’ny olombelona no izy; ny olombelona mijery ny tarehy fa ny Tompo kosa mijery ny fo”. Nampandalovin’i Isaï teo anatrehan’i Samoela koa ireto fito mirahalahy tamin’ny zanany ary hoy i Samoela tamin’Isaï : “Tsy misy nofidin’ny Tompo amin’ireto”. Ary hoy i Samoela tamin’Isaï: Ireo ihany va no zatovolahy rehetra?” Dia hoy i Isaï: “Mbola misy ilay faralahy, ka indro fa miandry ondry izy”. Ka hoy i Samoela tamin’Isaï: “Ampanalao izy, fa tsy hipetraka hihinana isika raha tsy efa tonga izy”. Dia nampanalain’i Isaï io. Mavo mena ny volon’izy izay; sady bary maso izy no tsara tarehy. Ary hoy ny Tompo: “Mitsangàna, hosory io, fa io no izy”. Dia noraisin’i Samoela ny tandroka nisy diloilo, ka nohosorany teo afovoan’ny rahalahiny io: ary hatramin’izany andro izany sy tamin’ny andro manaraka, dia nidina tamin’i Davida ny fanahin’ny Tompo.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny Kristianina tany Efezy (Efez 5, 8- 14)
» Mitsangàna ho velona dia hanazava anao i Kristy «
Ry kristianina havana, taloha ianareo no maizina, fa ankehitriny efa mazava ao amin’ny Tompo, ka mandehana toy ny zanaky ny mazava. Ary ny vokatry ny mazava dia ny soa, ny mety ary ny marina rehetra. Fantaro izay ankasitrahin’Andriamanitra. Aza mba mikambankambana amin’izay asan’ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa vao mainka ambarao aza ny haratsian’ireny, satria mahamenatra na dia ny hilaza fotsiny ny ataon’izy ireny an-takona aza; fa asehon’ny mazava avokoa ny zavatra rehetra, rehefa voambara ny haratsiany, ary na inona na inona aseho, dia tonga mazava koa. Izany no nanoratana hoe: Mifohaza ianao izay matory, ary mitsangàna ho velona, dia hanazava anao i Kristy.
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany (Jo 9, 1- 41)
« Nandeha izy nanasa ny masony, ka niverina nahiratra »
Tamin’izany andro izany, nony nandalo i Jesoa, dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba, ka hoy ny mpianany nanontany Azy: “Raby, iza moa no nanota, io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny, no teraka jamba izy?” I Jesoa namaly hoe: “Tsy izy no nanota, na ny rainy aman-dreniny, fa mba hisehoan’ny asan’Andriamanitra eo aminy no antony”. Tsy maintsy manao ny asan’ Izay naniraka Ahy Aho raha mbola atoandro: fa ho avy ny alina izay tsy azon’olona na iza na iza iasana. Raha mbola amin’izao tontolo izao Aho, dia fahazavan’izao tontolo izao”. Nony voalazany izany, dia nandrora tamin’ny tany Izy ka nanao feta tamin’ny rorany, nahosony ny mason’ilay jamba, dia hoy Izy taminy: “Mandehana manasa ny masonao any amin’ny farihin’i Silôe” (izany hoe, Iraka). Dia nandeha nanasa izy ka niverina nahiratra. Tamin’izay ny olona mifanakaiky trano taminy, sy izay nahita azy nangataka teo aloha nanao hoe: “Moa tsy ity ilay nipetraka nangataka?” Dia hoy ny sasany: “Izy io”. Fa hoy kosa ny sasany: “Tsia, fa olona mitovy aminy”. Ary hoy kosa izy: “Izaho no izy”. Ka hoy izy ireo taminy: “Nanao ahoana no nahiratan’ny masonao?” Dia hoy izy: “Ilay lehilahy atao hoe i Jesoa no nanao feta, nahosony ny masoko, dia nanao tamiko hoe: Mandehana manasa ny masonao any amin’ny farihin’i Silôe, dia lasa aho nanasa, ka nahiratra”. Ary hoy izy ireo taminy: “Aiza izany Lehilahy izany?” Novaliany hoe: “Asa”.
Dia nentiny tany amin’ny Farisiana ilay jamba taloha, fa andro sabata no nanaovan’i Jesoa feta sy nampahiratany ny masony. Nanontany azy indray àry ny Farisiana izay nahiratany, ka hoy ny navaliny azy: “Nasiany feta ny masoko, dia nosasako, ka nahiratra aho”. Tamin’izany ny sasany tamin’ny Farisiana nanao hoe: “Tsy Andriamanitra no nihavian’izany Lehilahy izany, fa tsy mitandrina ny sabata izy”. Fa ny sasany kosa nanao hoe: “Hataon’ny mpanota ahoana no fahavita fahagagana toy izany?” Koa nisara-kevitra izy ireo. Dia hoy indray izy ireo tamin’ilay jamba: “Mba ahoana kosa no filazanao Azy, fa nampahiratra ny masonao izy?” Ka hoy ralehilahy: Mpaminany Izy.
Dia tsy nety nino ny Jody fa jamba sy vao nahiratra izy, ka nampiantsoiny aloha ny ray aman-drenin’ity nahiratra, sy nanontaniany hoe: “Ity va no zanakareo izay lazainareo hoe teraka jamba? Ka nanao ahoana àry no nahiratany izao?” Dia namaly ny ray aman-dreniny ka nanao hoe: “Fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba; fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray koa izay nampahiratra ny masony, ka izy no anontanio fa efa lehibe izy: izy ihany no aoka hilaza ny momba ny tenany”. Ny ray aman-dreniny no nilaza izany, dia noho izy natahotra ny Jody, satria efa nifanaiky ny Jody fa horoahina amin’ny sinagôga izay hanaiky an’i Jesoa ho Kristy, ka izany no nanaovan’ny ray aman-dreniny hoe: izy no anontanio fa efa lehibe izy.
Dia nantsoin’ireo indray ilay lehilahy jamba taloha, ka nilazany hoe: “Andriamanitra no omeo voninahitra; fa raha iny Lehilahy iny, dia fantatray fa mpanota”. Ka hoy ny navaliny azy: “Tsy fantatro na mpanota izy na tsia, fa izao ihany no fantatro: jamba aho taloha ary mahiratra aho ankehitriny”. Dia hoy izy ireo taminy: “Inona no nataony taminao? Nanao ahoana sy ahoana avy no nampahiratany ny masonao?” Ka hoy ny navaliny azy ireo: “Efa voalazako taminareo, fa tsy nohenoinareo akory; ka ahoana indray no itiavanareo handre? Te-ho tonga mpianany koa va ianareo? “ Dia notevatevain’ireo izy sy nataony hoe: “Ialahy no mpianany, fa raha izahay kosa dia mpianatr’i Môizy. I Môizy fantatray fa nitenenan’Andriamanitra, fa iny kosa tsy fantatray akory izay niaviany”. Namaly ralehilahy ka nanao hoe: “Ity indray no mahagaga, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa Izy no nampahiratra ny masoko. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota; fa izay manompo Azy sy manao ny sitrapony no henoiny. Na oviana na oviana tsy mbola nisy olona re fa nampahiratra ny teraka jamba; ka raha tsy avy amin’Andriamanitra izany Lehilahy izany, dia tsy hahefa na inona na inona akory”. Dia namaly ry zareo, ka nanao taminy hoe: “Izay ialahy tena teraka tanatin’ny ota indray ve no mampianatra anay!” Sady noroahiny izy.
Ren’i Jesoa fa hoe noroahin-dry zareo izy, ka nony hitany dia nilazany hoe: “Mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao?” Namaly izy ka nanao hoe: “Iza moa no izy, Tompoko, mba hinoako Azy?” Dia hoy i Jesoa taminy:” Efa hitanao Izy, ary izay miteny aminao no Izy”. Ka hoy izy: “Mino aho, Tompoko”; sady niankohoka nitsaoka azy izy. Dia hoy i Jesoa: “Fanavahana no nahatongavako amin’izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra.” Ren’ny Farisiana sasany teo izany, ka hoy izy ireo taminy: ”Ary izahay ve mba jamba koa?” Dia hoy i Jesoa taminy:” Raha jamba ianareo, dia tsy ho nanan-keloka; fa noho ianareo ankehitriny manao hoe: Mahiratra izahay, dia tsy afaka ny helokareo”.